နိုငျငံတကာသတငျး Archives - ThutaSone
မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအဖွဲ့မှကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ အရာရှိကို သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်
February 14, 2020 ThutaSone 0
လက်ရှိအချိန် ကမ္ဘာပေါ်က လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်ထားတဲ့ ရောဂါပိုးတစ်မျိုးကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့အမည်တွင်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်ဟာဆိုရင် ကူးစက်မှုလျင်မြန်တဲ့အပြင် ကာကွယ်တဲ့ဆေးရော၊ ကုသတဲ့ဆေးပါ မရှိသေးတဲ့အပြင် WHO ကနေလည်း အဆိုပါရောဂါပိုးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ ကြေညာထားတာကြောင့် တတ်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်တွေ၊ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းချုပ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ […]
ထိုင်းလူသတ်သမားရဲ့ပစ်ခတ်မှုမှ တစ်ခြားလူတွေကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာပေးခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းလေး
ထိုင်းလူသတ်သမားရဲ့ပစ်ခတ်မှုမှ တစ်ခြားလူတွေကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာပေးခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းလေး မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ရှော့ပင်းမောလ် ပစ်ခတ်မှုဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို တုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းစစ်တပ်မှာ အရာခံဗိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အသက်(၃၂)နှစ်အရွယ် Jakrapanth Thomma က ဒီပစ်ခတ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။ ဒီအတွက် ထိုင်းစစ်တပ်မှာလည်း ပုံရိပ်ကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ ထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ကလည်း […]
ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဂျပန်တွင်လူ ၁ ဦး ပထမဆုံးအကြိမ်သေဆုံး
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဝူဟန်ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကြောင့် ပထမဆုံးအကြိမ် လူ ၁ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် သေဆုံးသူ ၁၄၈၃ ဦး ၊ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပ သေဆုံးသူ ၃ ဦး စုစုပေါင်း ၁၄၈၆ သေဆုံးခဲ့ကာ ကူးစက်ခံရသူ ၆၅၂၁၀ ဦး ရှိကာ ၅၉၅၄ […]
လူတွေ လူစိတ်ပျောက်ကုန်ကြပြီလား….လူသား​ဖောက်​ဂိုဏ်​ အားဖမ်းဆီး ….
February 13, 2020 ThutaSone 0
လူသား​ဖောက်​ဂိုဏ်​အားဖမ်းဆီး လူတွေ လူစိတ်ပျောက်ကုန်ကြပြီလား..ဘေးဆိုး ကပ်ဆိုးတွေ ..ရောဂါဆိုးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာလဲမပြောနဲ့လေ ဒီလို အဖြစ်တွေ ဘယ်လောက်များများ ဖြစ်နေကြပြီလဲ .. 13.02.2020 Bangkok ထိုင်းဘန်​​ကောာက်​မြို့အတွင်းဒီက​နေ့အထူး​ထောက်​လှန်း​ရေးရဲတပ်​ဖွဲ့မှ လူသားများသား​ဖောက်​ပြီး​မွေးလာ​သောခ​လေးငယ်​များ၏အင်္ဂါအစိတ်​အပိုင်းတချိုးကိုခွဲစိတ်​ယူကာ ​ရောင်းချ​နေကြသည့်​ – ဂိုဏ်းကိုသိရ၍ အငှါးကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​အမျိုးသ္မီးများကို ထား​သောအိမ်​တ​ဆောင်​ထဲကိုဝင်​​ရောက်​ဖမ်းဆီးကြောင်းသိရပါသည်​ ။ အမျိုးသ္မီးတဦး၏အငှါးကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ခမှာ ခ​လေးငယ်​တ​ယောက်​​အောင်​မြင်​စွာ​မွေးဖွားနိုင်​လျင်​ ဘတ်​​ငွေ ​လေးသိန်းမှငါးသိန်းအထိရ​ကြောင်းသိရပါသည်​ […]
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည့်အမျိုးသား ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ်အပြင် သင်းကွပ်ခံရမည်
February 9, 2020 ThutaSone 0
၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည့်အမျိုးသားကာဇက်စတန်ဥပဒေသစ်အရ သင်းကွပ်ခံရမည်၁၂ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို ကျောင်းအိမ်သာထဲတွင် အဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့သည့်အမျိုးသားသည် ကာဇက်စတန် ဥပဒေသစ်အရ ဆေးဖြင့်သင်းကွပ်ခံရ တော့မည်ဖြစ်သည်ကလေးသည် ပြီးခဲ့ သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျောင်းခန်း အပြင်ဘက်ထွက်ကာ အိမ်သာ ရှိရာဆီ သွားခဲ့သည်။ကျောင်းနောက်ဘက်ရှိ သန့် စင်ခန်းသို့ရောက်သောအခါ အသက် ၃၈ […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ အဓိက စက်မှုပစ္စည်းများ ပိတ်ထားရတာကြောင့် ကမ္ဘာ့ပေါ်မှာ မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးဖြစ်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Ulsan မြို့မှ Hyundai ကားစက်ရုံကုမ္ပဏီဟာ သောကြာနေ့မှာ ရပ်နားလိုက်ရပါတယ်။ စက်ရုံ ၅ ခု နဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ နှစ်စဉ် ကားအစီးရေ […]
February 8, 2020 ThutaSone 0
တရုတ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၃၀ ကျော်လာကာ ပိုးတွေ့လူနာ ၃၀,၀၀၀ ကျော်ဖြစ်လာ
ဩစတြေးလျမှာ လည်း လူတွေအပြင်မထွက် ရဲလောက်အောင် လင်းနို့တွေ သောင်းကျန်းေ န …..
လင်းနို့တွေဟာ လူသားတွေအပြင် သတ္တဝါတော်တော်များများကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ဖြန့်ဝေနေတဲ့ သတ္တဝါပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားအားလုံး ထိတ့်လန့်နေတဲ့ ရောဂါပိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကလည်း လင်းနို့တွေက စတယ်လို့ ပြောစမှတ်ပြုနေကြပါတယ်။ အဆိုပါ လင်းနို့တွေဟာ ရောဂါပိုးတွေကို သယ်ယူပြီး သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း ပိုးမွှားများစွာကို […]
”မွေးခါစ ကလေးငယ်လေးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး” စစ်ဆေးတွေ့ရှိလို့ ဝူဟန်က ပြည်သူများ ထိတ်လန့်နေကြ ….
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူအချင်းချင်းကူးစက်နိုင်တာကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကပါ စိုးရိမ်နေကြတာပါ…. ယခုအခါထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ကို မွေးကာစ ကလေးငယ်မှာတွေ့ရှိရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်….. ဝူဟန်မြို့က ကလေးဆေးရုံတစ်ရုံမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်ကို နာရီ ၃၀ ကြာ စစ်ဆေးရာမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်….. ဒီသတင်းကြောင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ မိခင်ကနေတစ်ဆင့် […]